Intengo yemoto ye-BLDC 12V 24V Brushless DC motor Speed ​​Speed ​​Systems
Intengo yemoto ye-BlDC i-12V 24V iyathengiswa
I-Brushless DC Motors | Amanani aphansi, Ikhwalithi ephezulu
I-12V 24V 36V 48V Brushless DC (BLDC) Motors Umkhiqizi ngobuchwepheshe bamuva nemishini '
Sinesipiliyoni seminyaka eminingi ekwenziweni kwezimoto, futhi imikhiqizo yethu yathunyelwa emazweni amaningi aphesheya kwezilwandle. Sinqume amakhasimende athembekile futhi athembekile, akhiqiza imoto enhle kuphela. Imoto kagesi eyi-brushless DC motor (iBlDC motor noma i-BL motor), eyaziwa nangokuthi i-motor commutated motor.Buy intengo ephansi, ephezulu ye-brushless dc motor KUSUKELA US MANJE ~ ~
Intengo Yezimoto zakwaBldc, Wholesale & Suppliers
I-Brushless DC motors ikhombisa ukusetshenziswa kwamandla okunciphisa, impilo ende, umsindo ophansi, usayizi we-compact kanye nezimpawu zokukhanya kwesisindo. I-STSPIN32F0 iyiSystem-In-Package enikeza isixazululo esihlanganisiwe esifanele ukushayela imoto motors ezintathu-isigaba se-BLDC isebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokushayela.China 72V 10kw Isithuthuthu Esihamba Ngogesi ISIMPAHLA. Idivaysi ye-DRV10983 iyisigaba esinezinzwa ezinenjini esinezinzwa ezintathu ezinamandla ahlanganisiwe ama-MOSFET. I-1 hp (750W) moto ye-BlDC enosayizi we-flange elingu-80 mm, isebenza ku-24V / 48/72 / 96V voltage nesizukulwane esiphansi somsindo.
Inkampani yethu ihlinzeka ngemoto ye-BLDC, i-Brushless DC Motor, i-dc motor brushless, i-dc ne-BLDC abashayeli bezimoto ngobuchwepheshe bamuva nemishini ngamanani aphansi.
Noma ngabe iluphi uhlobo lwe-24v bldc motor, motor 5kw bldc, 1500w bldc motor, 2000w bldc motor, 3kw bldc motor, thola intengo yazo evela eChina inkampani ehamba phambili futhi sizokunikeza ukusebenza okuhle kakhulu nezindleko eziphansi kakhulu.
Amandla aphezulu asuka ku-200W kuya ku-20KW, 1500/3000 RPM, Okujwayelekile Injongo ene-Controller kanye nogesi osuka ku-24V kuya ku-120V, kusuka ezimotweni kuya kwizicelo zezimboni. Izindleko ezilula, ezihlangene, nezinga eliphansi.
Izicelo zezezimboni ezisetshenzisiwe
Sinikeza ngentengo ephansi, i-brushless dc motor high torque low speed
Uchungechunge iBLDC high torque high-ngempumelelo inguquko yeBrushless DC Motors, esetshenziselwa Izimoto Zikagesi Nesicelo Esindayo Sezimboni Zezimboni, izinto ezisebenza ngogesi, ezokuhamba. i-encoder encoder noma i-encoder ngokuphelele enamathiselwe, amabhuleki we-Brushless DC Motors anombhalo ophansi we-voltage wohlelo lokusebenza. Inamandla ngokwanele ukuvula noma ukuvala izimpumputhe, noma okunye ukukhanya.
Sinikeza ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, ephansi. Iminyaka yesipiliyoni sokwenza izimoto imane ukukunikeza ikhwalithi ephezulu nemoto eqinile. Yini i-Brushless DC motor (BLDC) nokuthi Ungayilawula kanjani nge-Arduino.I-STSPIN32F0 iyiSystem-In-Package enikeza isisombululo esididiyelwe esifanele ukushayela izinjini ezintathu ze-BLDC motors besebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokushayela. Uma unemibuzo ungaxhumana nathi, sizojabula ukukusiza!
Uma eminye yale mikhiqizo ingeyakho, sicela uxhumane nathi! Sikulungele futhi sibheke phambili ekubambisaneni kwethu. Sithatha ikhwalithi njengenzuzo nentengo ephansi njengobuqotho.